PSG Oo Dalab Ka Gudbisay Lionel Messi, Haddii Uu Ka Aqbalay & Barcelona Oo Godkeeda Biyo Ugu Galeen - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaPSG Oo Dalab Ka Gudbisay Lionel Messi, Haddii Uu Ka Aqbalay & Barcelona Oo Godkeeda Biyo Ugu Galeen
PSG Oo Dalab Ka Gudbisay Lionel Messi, Haddii Uu Ka Aqbalay & Barcelona Oo Godkeeda Biyo Ugu Galeen
July 3, 2021 Apdihakem Omer Adam Wararka Ciyaaraha Maanta, PSG, Wararka La Liga 0
Sida uu sheegayo wargeyska ree Spain ee AS, kooxda Paris Saint-Germain ayaa dalab ka gudbisay kabtankii kooxda Barcelona ee Lionel Messi kaas oo heshiiskiisii kooxdaasi dhacay 30-kii bishii June.
Markii ugu horreysay kaddib mudo 17 sano ah, Messi ayaan ahayn xiddig Barcelona ah kaddib markii qandaraaskiisu dhacay saqdii dhexe ee 30-kii June isla markaana haatan laba maalmood oo buuxa koox la’aan ah.
Marka laga yimaado in qandaraaskiisii qaaliga ahaa ee kooxdu soo dhammaaday, madaxweynaha Barcelona ee Joan Laporta ayaa kalsooni ku qaba Messi uu heshiis kordhin u samayn doono kooxda,
Iyadoo haatan Messi uu diirada saarayo tartanka Copa America ee uu xulkiisa Argentina kala qayb qaadanayo, aabihii ahna wakiilkiisa Jorge Messi ayaa si joogto ah xidhiidh ula samaynaya kooxda Barcelona oo ay xal ka wada shaqaynayaan.
Walow dhammaan calaamaduhu ay sheegayaan in Leo uu qandaraas kordhin samayn doono haddana AS ayaa sheegaya in madaxweyne Laporta uu wer-wer cusubi soo food-saaray kaddib markii ay Paris dalab miiska u saartay 34 sano jirkaas.
Paris ayaa ahayd koox mudooyinkan ugu dambeeyay si joogto ah loola xidhiidhinayay Leo iyadoo agaasimaha ciyaaraha kooxdaas ee Leonardo uu sheegay in Messi uu markasta liiska xiddigaha ay rabaan ku jiri doono.
Si kastaba wadahadalada u dhaxeeyay Messi iyo kooxda caasimada France ayaa baaba’ay mudo kahor iyadoo uu u muuqdo ciyaaryahankaasi mid baaqi kusii ahaanaya Camp Nou.
Sidaasi oo ay tahay haddana PSG ayaan marnaba is dhiibin iyada oo xaalada khaaska ah ee uu hadda galay uga faa’ideysanaysa kaddib dalabka ay ka gudbisay walow aan wali la caddayn haddii uu ka aqbalay.